Manchester United Oo Ka Faa'iidaysanaysa Dhibaatada Haysata Barcelona & AFARTA Ciyaartoy Ee Ay Ka Doonayaan Camp Nou - Gool24.Net
Manchester United Oo Ka Faa’iidaysanaysa Dhibaatada Haysata Barcelona & AFARTA Ciyaartoy Ee Ay Ka Doonayaan Camp Nou
Manchester United ayaa la sheegay inay qorshaynayso inay weerar ku qaaddo Barcelona iyadoo ka faa’iidaysanaysa xaaladda adag ee ay ku jirto, isla markaana kasoo qaadanaysa afar ka mid ah ciyaartoyda naadigaas oo ay suurtogalka tahay in la heli karo.
Tabbare Ole Gunnar Solskjaer oo dibu-dhis ku samaynaya kooxdiisa kaddib markii ay semi-finalka kaga hadhay Europa League, isla markaana kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League soo gashay xili ciyaareedkan, waxay suuqa u gelaysaa ciyaartooyo aanay lacag badan kaga bixin, isla markaana ay suurtogal tahay inay heli karaan.
Ousmane Dembele, Arturo Vidal, Ivan Rakitic iyo Samuel Umtiti ayaa soo galay liiska ciyaartoyda ay Manchester United doonayso, waxaanay dhamaantood diyaar u yihiin inay iskaga baxaan Barcelona maadaama aanay ka helin muhiimaddii ay dareensanaayeen inay u qalmaan.
Wargeyska Mundho Deportivo oo wakran qoray ayaa sheegay in Manchester United ay toddobaadyada soo socda dhexda u xidhan doonto sidii ay usoo qaadan lahayd afartan ciyaartoy oo iyaga naf ahaantoodana ay kala mudnaaan sii siinayso.
Ousmane Dembele iyo Samuel Umtiti ayaa ah labada ciyaartoy ee ay marka ugu horreeya heshiiskooda ka shaqayn doonto, isla markaana uu Ole Gunnar Solskjaer dareensan yahay inay buuxinayaan laba boos oo uu dareemayo in kooxdiisu ka wiiqan tahay.
Weeraryahanka reer France ee Ousmane Dembele ayuu Solskjaer u arkaa inuu yahay ciyaartoy noqon karaya beddelka laacibka ay saxeexiisa u waalanayaan ee Jadon Sancho oo Borussia Dortmund ay ku adkaysahy, halka Umtiti uu ka garab ciyaari doono Harry Maguire.
Rakitic ayaa isaga horeba loo sheegay inuu tegayo, waxaana lala xidhiidhinayay kooxo ay ka mid Sevilla iyo Arsenal, waxaanay Man United u haysataa fursad weyn, halka Vidal ay Barcelona u aragto inuu dhaafay waqtigiisii oo aanay wax dambe usii oollin Camp Nou.